Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Gabriel Magalhaes Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Gabriel Magalhaes Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinụlọ, ndị nne na nna, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Net Worth, Web na Life Life
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere njem ndị na - agba ọsọ na Brazil, site na nwata, rue mgbe ọ mechara nwee ihe ịga nke ọma.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ebe a na - eto eto - nchịkọta zuru oke nke Gabriel Magalhaes's Bio.
Ndụ na Bilie Akụkọ nke Brazil.
Afọ 2020, n'enweghị obi abụọ, ekpughere ọtụtụ ọnọdụ atụghị anya na bọọlụ Arsenal.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Mikel Arteta ụzọ nke na-atọ ndị Fans ụtọ na-eme ọbịbịa nke onye ngosi akara ngosi.
Ugbu a mgbe ọ nụsịrị ọtụtụ ihe banyere mbufe ya, ọ ga-abụ na ndị Fans bọọlụ agụbeghị ọtụtụ ihe gbasara akụkọ banyere Gabriel Magalhaes's Biography.
Yabụ, anyị debere ọmarịcha edemede a na ebuteghị oge, ka anyị bido
Gabriel Magalhaes Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido ebido, aha ya bụ Gabriel Dos Santos Magalhaes. A mụrụ onye na-egwu bọọlụ Brazil na 19th ụbọchị nke ọnwa 1997 na nne na nna ya, Mr na Mrs Marcelo Magalhaes na Pirituba District nke São Paulo, Brazil.
Little Gabriel (dị n'okpuru ebe a) bụ otu n'ime ọtụtụ ụmụaka amụrụ site na njikọ dị n'etiti nna ya, Marcelo na obere nne a ma ama.
Lee, obere foto nwata nke Gabriel Magalhaes. Ebe E Si Nweta IG.
Ee, gị na m maara na onye ọ bụla mụrụ onyinye pụrụ iche. Agbanyeghị, oge iji chọpụta ma jiri onyinye mmadụ mee ihe dabere na onye nwe ya.
N'ụzọ dị mma, Gabriel Magalhaes chọpụtara banyere nkà football ya n'oge ọ dị obere nke mama ya na papa ya kwadoro.
Mgbe ọ na-atụgharị uche n'oge ọ bụ nwata, Gabriel na-akọ na ya na ndị enyi ya na-egwu bọl oge ọ bụla ọ lọtara n'ụlọ akwụkwọ.
Eziokwu bụ, okwu enweghị ike ịkọwa ọ joyụ na mmezu nke na-ejide ya mgbe ọ bụla ọ na-egwu bọl. Ọ dị ka bọọlụ ghọrọ ike kasịnụ nke metụtara azụmahịa nke nwata Gabriel.
Gabriel Magalhaes Ezigbo Ezinụlọ:
N'ụzọ dị mma, ezinụlọ dum nke ọdịnihu nke Arsenal Player agbachighị anya ha na nkà ndị ọzọ ọ na-egosi.
Ozi ọma ahụ bụ na nne na nna Gabriel Magalhaes hụrụ ịhụnanya maka football dịka ọdịnihu ezinụlọ na-adabere na ya.
N'ihi ya, ha chọrọ ohere iji nyere nwa ha nwoke aka ịbanye na football. Anyị na-enyekwu gị nkọwa na nke a mgbe e mesịrị na Bio ya.
Gabriel Magalhaes Ezinụlọ:
Dịka ọ na-eme mgbe niile, anyị ga-atụle agbụrụ nke onye Brazil site na ihe nketa nna ya. Na-ekpe ikpe site na ebe a mụrụ ya, Gabriel Magalhaes ezinụlọ sitere na Sao Paulo.
Ọ bụrụ na ịmaghị, nke a bụ ebe Obodo ahụ nọ na Brazil.
Onye agbachitere Brazil si na Sao Paulo pụta. Hụ otu ebe amụrụ ya dị n'akụkụ eserese eserese maapụ.
Gabriel dị ka ọtụtụ n'ime ndị ezinụlọ ya maara nke ọma n'ịsụ asụsụ obodo São Paulo - Portuguese.
Agbanyeghị, ịgba bọl emeela ka ọ bụrụ iwu na onye Brazil ga-amụ asụsụ French. Na nkenke, Gabriel nwere ike ikwurịta okwu na Portuguese na French.
Gabriel Magalhaes Football Origin- Exgbọ njem ahụ:
Maka nwata, na-etolite n'okporo ámá nke Pirituba- ógbè dị n'akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ nke São Paulo jupụtara na ncheta egwuregwu nwata.
N'oge ahụ, ọ na-akpọkarị onwe ya na ndị enyi ya ka ha gbaa bọl. N'ịhụ na ọ ga-abụ ọrụ ịgba bọl, ndị agbata obi ga-adụ ndị nne na nna Gabriel Magalhaes ọdụ ka ha debanye aha nwa ha nwoke n'ụlọ akwụkwọ football.
N'ụzọ dị mma, nna ya kwenyere ndụmọdụ ọha na eze ma deba aha ya bụ Gabriel n'ụlọ akwụkwọ football.
… Mgbe ị nọrọ naanị izu abụọ n'ụlọ akwụkwọ bọọlụ, ohere maka ịgba bọl bọọlụ meghere maka nwatakịrị ahụ.
Gabriel na nna ya gara njem karịrị narị kilomita anọ iji hụ ikpe ya na ụlọ ọrụ Florianopolis, Avai.
Gaghị ekwenye n'eziokwu na ihe egwuregwu bọọlụ Brazil mere ọmarịcha ọrụ wee nweta ebe na-adịgide adịgide na Avai Academy.
Mgbochi Ọrụ Nke Mbụ: Agha ahụ megide Ọrịa Homlọ:
N'ụzọ na-akpali mmasị, nwa okorobịa Brazil hapụrụ ụlọ maka Avai Football Academy na 13. Ọ bụ oge mbụ ya na ndị ezinụlọ ya.
Eziokwu bụ, mmetụta ọ na-enwe mgbe ọ bụla ọ na-eche banyere ezinụlọ ya bụ ihe a na-apụghị ịnagide. N'ụzọ dị mwute, Gabriel enweghị ike ịhapụ nna ya, mama ya na ụmụnne ya maka football. N'ihi ya, ọ kwụsịrị na football ma laghachi n'ụlọ ya.
Mgbe ha ruru ụlọ, ihe niile dị ka ihe nzuzu nye nwa okorobịa Gabriel. Nke mbụ, ọ ghaghị ịbanye onwe ya iche ma chebara mkpebi ya echiche.
Obi dị m ụtọ na nna Gabriel nyere ya ọtụtụ ndụmọdụ. N'ịgbaso okwu agbamume nna ya, nwa okorobịa Brazil ahụ laghachiri Avai Academy. Otú a ka mmalite nke ọrụ football ya si malite.
Hụ otú nwatakịrị si lee anya mgbe afọ ole na ole gasịrị mgbe ọ gara n'ihu njem njem football ya na Avai Academy.
Familyhapụ ezinụlọ ọzọ maka football:
Mgbe ọ laghachiri na Avai, Nwa agbọghọ ahụ malitere ilekwasị anya na egwuregwu ahụ dịka otu ndị Gabriels ndị ọzọ si Brazil mee- Barbosa na Martinelli.
Eziokwu bụ, ịgbachitere abụghị ọrụ mbụ ya. Ọ malitere igwu egwu n'ihu dị ka ọtụtụ ndị di na nwunye ya mere-amasị Vinicius Junior na David Neres.
N'ụzọ dị mwute, ọrụ Gabriel n'oge ọzụzụ adịghị egosipụta àgwà nke onye na-awakpo ya. N'ihi ya, onye nchịkwa ya aghaghị ịgbanwe ya n'ọnọdụ aka ekpe n'ihi na ọ nọ n'ụkwụ ma nwee ike ịkwado ọrụ nchekwa.
Obi dị m ụtọ na mbọ niile a Gabriel gbara na otú o si na-azụ ya mgbe niile. Ka ọ na-erule afọ 18, Gabriel pụtara maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ naghị ala azụ ịchụpụ bọọlụ na igbe ya-18.
Gabriel Magalhaes Biography - Tozọ Na-ewu ewu:
Afọ ole na ole mgbe ọ gụsịrị Avaí, Gabriel n'oge a, hapụrụ ezinụlọ ya gaa mba dị anya - France. Ọ banyere n'ime ndị otu Njikọ 1 - LOSC Lille.
Ọ na-aga n'ihu ọrụ ịgba chaa chaa site na ịkwaga igwu egwu LOSC Lille.
Mgbe ọ bịarutere France, Gabriel nwere mmasị na ụjọ na ihu igwe oyi na asụsụ - French - nke ọha mmadụ.
N’ihi ya, o were ya oge iji kwekọọ n’ọnọdụ ihu igwe nke gburugburu ebe obibi. E wezụgakwa nke ahụ, Gabriel bidoro ịmụ gbasara French ka ọ mụta asụsụ French.
Onye na-agbachitere anaghị etinye oge dị ukwuu na Lille tupu e nyefee ya na ESTAC Troyes na June 2017. Na Troyes, Gabriel gosipụtara arụmọrụ dara ogbenye.
Naanị otu egwuregwu ka ọ kpọlitere otu egwuregwu tupu ya agbaa ya GNK Dinamo Zagreb II.
Gabriel Magalhaes Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe ọ laghachiri na mbinye ego na June 2018, Youngster nwetara ohere iji rụọ ọrụ dị egwu.
N'eziokwu, Gabriel meriri ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka Lille na egwuregwu megide ndị Paris Saint-Germain a ma ama na Eprel 2019- otu n'ime ndị ahụ ọ na-echefu na ngwa ngwa.
Hụ mmeghachi omume ya dị oke egwu mgbe ọ gbasịrị ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka Lille.
N'ịbụ onye na-ebili na iri na otu nke Lille, akara ngosi Brazil n'oge na-adịghị anya nwetara oge egwuregwu zuru ezu. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọganihu ya.
You maara?… Ọ na-egwuri egwu na-amasị nke Victor Osimhen Onye na-ekwu okwu n'obodo a na 2020.
Na-arị elu ruo n'ogo nke Marquinhos, Gabriel malitere ịdọrọ mmasị nke klọb ndị nwere mmetụta dịka Manchester United FC na Arsenal FC n'oge oghere mbufe nke 2020.
Ọ bụ nke Arsenal Mikel Arteta na-emechi nkwekọrịta nke ịbanye ya maka nkwekọrịta ogologo oge na Septemba 2020. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
A maara aha ya nke ọma mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ogologo oge na Arsenal.
Banyere Gabriel Magalhaes Nwanyị:
Ebe ọ bụ na o biliri ka ọ bụrụ aha ya, ọfụma ndị Brazil ekwela ka ndị fan na ndị na-ede blọgụ jụọ maka ndụ ịhụnanya ya.
Na-ekpe ikpe site n'echiche ya mara mma na ụdị egwuregwu, ọ dịghị agọnahụ eziokwu ahụ na ụmụ nwanyị agaghị achọ ị kwụ n'ahịrị iji were ọnọdụ nke ndị enyi nwanyị na nwunye na nne nke ụmụ ya ma ọ bụ ụmụ ya.
Eziokwu bụ, Gab debere ndụ mmekọrịta ya na onwe ya. Onye na-egwu bọl raara onwe ya nye maara na ọ ga-arụ ọrụ ọzọ iji dekọọ nnukwu ọrụ.
N'ezie, nke a kwesịrị ịbịa n'ihu ikpughe enyi ya nwanyị. Maka ugbu a, ọ na-anwa ike kwere ya iji zere ụdị ndọpụ mmekọrịta ọ bụla.
Na-enyocha ajụjụ ọnụ niile Gabriel gbara, ọ dịbeghị mgbe ọ gosipụtara mmasị na alụmdi na nwunye ma ọ bụ ịzụlite ezinụlọ. Ọ ga-abụ na ọ na-eche na oge eruola ka ọ hapụ itinye onwe ya na mmekọrịta alụmdi na nwunye.
Gabriel Magalhaes Ndụ Ezinụlọ:
Eeh, otutu ndi otu egwu ndi Arsenal a na abu otito nke egwu egwu. N'ikwu eziokwu, ị gaghị ama ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị nkwado sitere na ndị ezinụlọ ya - ọkachasị ndị mụrụ ya. Ka anyị kọọrọ gị gbasara ha!
Banyere Gabriel Magalhaes Nna:
Na mbu, nnukwu nna na-akpọ Marcelo Magalhaes na ọ bụ onye na-akwado ya. Marcelo Magalhaes bụ nna nke na-adị ugbu a, na-arụ ọrụ mgbe niile na ama egwuregwu iji lelee nwa ya nwoke.
Ọbụna n'oge kachasị njọ nke ndụ Gabriel, nna ya na-ewepụta oge iji kwado ya n'ụzọ omume na uche. Foto dị n'okpuru bụ Marcelo Magalhaes na Gab.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke nna Gabriel Magalhaes nọ n'akụkụ ya.
Banyere Gabriel Magalhaes Nne:
Ọzọkwa, onye ọzọ na-enweghị atụ na ndụ onye Brazil bụ mama ya. Nke mbụ anyị hụrụ banyere ya bụ ụzọ ihere na mgbasa ozi.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị onye na-achọ iji snapshots, mama Gabriel na-achọ mgbe niile ka ọ nwee ihe ịga nke ọma. Nlekọta nne a nwere n'oge na-adịbeghị anya, wetara uru ya dị ka a hụrụ n'okpuru.
Ọ ga - abụrịrị nne ya? O nyere ya ụgbọala mara mma.
Dị nnọọ ka nne ọ bụla nwere ọrụ ọ bụla ga-eme, Oriaku Marcelo Magalhaes na-adụkarị nwa ya ọdụ banyere ọtụtụ nsogbu dị mkpa na ndụ ya.
Banyere Gabriel Magalhaes ibmụnne:
Eziokwu bụ na amụrụghị naanị ya n'ụlọ ya. Gabriel Magalhaes nwere ụmụnne - nwanne nwoke, Vinicius na nwanne nwanyị aha ya bụ Mayara.
Mmekọrịta dị omimi n’etiti ha. Anyi matara mgbe anyi lere anya na Instagram nke Footballer- peeji nke gosiputara umunna Gabriel dika ndi na-akwado ya.
Zute nwanne nwanyị Gabriel Magalhaes, Mayara, na nwanne ya nwoke, bụ Vinicius.
Iji kọwakwuo, nwanne Gabriel Magalhaes, Vinicius (Ọ bụghị Real Madrid V-Junior), na nwanne, Mayara na-esochi peeji nke Instagram nke Arsenal ozugbo ọ kara akara aka na ụlọ ọrụ ahụ.
N'ezie, a na-ahụ ndị na-agba bọọlụ n'anya nke ukwuu yana ndị na-akpa afọ ezinụlọ, ọ na-eduzi ihe nlereanya.
Banyere Gabriel Magalhaes Ndị ikwu:
N'ihi na ọ bụ ezigbo mmadụ, enweghị ezigbo ozi banyere nne na nna ochie Gabriel.
N'otu aka ahụ, onye ọkpụkpọ Arsenal a nwetara ọhụrụ ahụbeghị mkpa ọ dị ikwu maka nwanne nna ya na nwanne nne ya yana ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanyị.
Gabriel Magalhaes Ndụ Nke Onwe:
dị nnọọ ka Neymar na ọtụtụ ndị ọzọ eji ejiji, ndị Defender bụ onye ejiji. Ekike ya na ọdịdị ya n'èzí egwuregwu bọọlụ bụ ihe akaebe zuru oke nke ịhụnanya Gabriel nwere maka ejiji.
… ma eleghị anya onye na-agbachitere ahụ nwere ike ịtụle ịbanye na ịme ngosi uwe ma ọ bụrụ na ịgba ọsọ agba bọọlụ.
Mata ya site na Football.
Nke zuru oke, Gabriel Magalhaes egosila mmasị na ọrụ ndị ọzọ na-abụghị bọọlụ. N'otu oge, ọ gosipụtara na ihe omume ntụrụndụ ya gụnyere igwu egwuregwu vidio na njem.
Ọ bụkwa ihe na-adọrọ mmasị na onye ọkpụkpọ bọọlụ enwegoro mmasị na ikiri egwuregwu basketball. Foto dị n'okpuru ebe a na-enye nkọwa banyere ịhụnanya Gabriel nwere maka egwuregwu vidio na basketball.
Ike gwụrụ ya igwu egwuregwu vidio.
Gabriel Magalhaes Eziokwu nke Ndụ:
Ọ bụ ezie na Gabriel erubeghị isi nke ọrụ ya, o meela ọtụtụ ego site na football.
Nweta Gabriel nwere ike inye ya ndụ ziri ezi, n'agbanyeghị na ụgwọ ọnwa ya enweghị ike iru ihe masịrị ya Lionel Messi, C. Ronaldo, na Neymar.
Gabriel Magalhaes rygwọ na Net Worth:
Nweta In Pound (£)
Enweta ego na Dollar ($)
Kwa Afọ £ 3,385,200 € 3,773,508 $ 4,458,048
kwa ọnwa £ 282,100 € 314,459 $ 371,504
Kwa Izu £ 65,000 € 72,456 $ 85,600
Kwa .bọchị £ 9,286 € 10,351 $ 12,229
Kwa elekere £ 387 € 431 $ 510
Kwa Nkeji £ 6.5 € 7.2 $ 8.5
Kwa nke abụọ £ 0.11 € 0.12 $ 0.14
Ọ bụ naanị oge tupu ya enwee mmelite nke ụgwọ ọrụ na ụgwọ ọnwa ya. N'oge itinye Bio a, Gabriel Magalhaes nwere atụmatụ Net Net nke € 17.50 nde.
Gabriel Magalhaes arsgbọ ala:
Banyere nke 2020, onye Brazil bọọlụ chịkọtara Autos dị oké ọnụ ahịa ọnụ ahịa ihe ruru $ 500 nde. Dika edere n'okpuru, o nwere otutu ugbo ala di iche iche dika ihe ndi ozo.
Lelee Gabriel Magalhaes 'Car.
Gabriel Magalhaes Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Memoir anyị, nke a bụ eziokwu ole na ole ga - enyere gị aka inweta nghọta zuru ezu banyere 6 na 3 na mmadụ.
Eziokwu nke 1: Ego iri na otu nke 11 ya
Iji gosi ka ọgaranya bọọlụ bọọlụ bụrụla, anyị emegogo ụgwọ ọnwa Arsenal nke Gabriel Magalhaes- iji gosipụta ihe ọ rụtara kemgbe ị bịara ebe a.
Nke a bụ ihe Gabriel Magalhaes eritela uru kemgbe ị malitere ile Peeji a.
Eziokwu nke 2: Gabriel Magalhaes Anu ulo:
N'ezie, ọ naghị ahapụ ya ma a bịa n'ilekọta anụ ụlọ. Gabriel nwere obere nkịta na-adịghị ele anya na ọ na-emenye ụjọ. Ọ bụghị naanị na ọ hụrụ ya n'anya ma jiri ya kpọrọ ihe mana ọ na-akpado ya na oge ọ bụla ọ gara ije.
Zute nkịta nkịta mara mma nke Gabriel.
Eziokwu nke 3: Gabriel Magalhaes igbu:
Onye na-agbachitere Arsenal buru ibu na-egosipụta ọnụọgụ ahụ ya dị oke mkpa. Ọbụna mgbe ọ na-eyi uwe elu ya, onye ọ bụla hụrụ ọhụụ nke aka ekpe ya.
Nwere ike ịkọwa ihe egbugbu ya pụtara? Hapụ azịza gị na igbe igbe.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị na-agbachitere dịka Sergio Ramos, Djibril Cisse, na Marcos Rojo, Gabriel nwere mmasị naanị na akara egbugbu. Ọ bụ ya mere o ji jiri aka aka ekpe ya jiri aka ya tụnyere ndị na-agbachitere ndị a kpọtụrụ aha bụ ndị gbatụrụ egbugbu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ahụ ha niile.
Eziokwu nke 4: Nkezi ọkwa Fifa:
Na pitch, nwa agbọghọ ahụ gosipụtara ezigbo ịgba chaa chaa nke mere ka ọ bụrụ ọkwa dị mma na FIFA.
Dị ka ị pụrụ ịhụ site na foto dị n'okpuru ebe a, Gabriel nwere ikike nke ịmalite nkà ya na ịghọ onye ọkpụkpọ bara uru karị.
Ọ nwere ohere dị elu nke igosipụta nnukwu ịgba ọsọ football.
Iji nweta eziokwu ngwa ngwa, nke a bụ nchịkọta nke Gabriel Magalhaes 'profaịlụ maka perusal gị.
Aha n'uju: Gabriel Dos Santos Magalhaes
Aha Nick: Gabriel Magalhaes
Ụbọchị ọmụmụ: 19th December 1997
Ebe amụrụ onye: Mpaghara Pirituba nke São Paulo, Brazil
Ndị nne na nna: Maazị na Oriakụ Marcelo Magalhaes
Ụmụnne: Vinicius, na Mayara
Ihe omume: igwu egwuregwu vidio na njem
Ezigbo Net: € 17.50 nde
Ndakpọ Ọrụ: Avai (2010 - 2017)
EGO LOSC (2017 - 2020)
ESTAC Troyes (Loan 2017)
GNK Dinamo Zagreb II (2018 Mbinye ego)
Arsenal (2020 - Ugbu a)
Anu ulo: Dog
Ihe omuma anyi nke Gabriel Magalhaes na-akuziri anyi na anyi kwesiri ihu nsogbu na nsogbu n’agbanyeghi otu ha si bia.
N'ihi na ndị nne na nna Gabriel Magalhaes tinyere aka n'oge ọnwụnwa ya, echekwara ọrụ nwata ya. Eziokwu bụ, naanị mmadụ ole na ole na-enweta ohere nke abụọ dịka onye Brazil.
Ndị otu LifeBogger niile daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Gabriel Magalhaes Childhood. Obi ga-adị anyị ụtọ ma ọ bụrụ na anyị ahụ ụfọdụ nzaghachi maka echiche gị banyere onye na-agba bọọlụ na ngalaba nkọwa.